Fiarovana, tsiambaratelo ary Cookies | la-manette.com
Karazana angon-drakitra nangonina
Tsy manome lisitr'ireo karazana angon-drakitra voaangona ny tompony.
Ny antsipiriany feno momba ny karazana angon-drakitra voangona tsirairay dia omena ao amin'ny fizarana natokana ho an'ity politika momba ny fiainana manokana ity na ao amin'ny lahatsoratra manazava manokana navoaka alohan'ny fanangonana ny Data.
Ny angon-drakitra manokana dia mety omen'ny mpampiasa malalaka, na, raha ny angon-drakitra momba ny fampiasana, dia angonina ho azy rehefa mampiasa ity fampiharana ity.
Raha tsy misy fanamarihana manokana, ny angon-drakitra rehetra angatahin'ity fampiharana ity dia tsy maintsy atao ary ny tsy fisian'izy ireo dia mety tsy hahavita hanome ny serivisy amin'ity fampiharana ity. Raha toa ity fampiharana ity dia mamaritra fa ny angon-drakitra sasany dia tsy voatery, dia malalaka ny mpampiasa tsy hampita izany raha tsy misy fiantraikany amin'ny fisian'ny serivisy na ny fiasan'ny serivisy.
Ireo mpampiasa izay manana fisalasalana momba ny angon-drakitra manokana tsy maintsy atao dia asaina mifandray amin'ny tompony.
Ny fampiasana Cookies - na fitaovana fanaraha-maso hafa - amin'ity fampiharana ity na amin'ny tompon'ny serivisy antoko fahatelo ampiasain'ity Application ity dia mikendry ny hanome ny serivisy nangatahan'ny mpampiasa, ankoatra ireo tanjona hafa voalaza ato amin'ity antontan-taratasy ity sy ao amin'ny Cookie. Politika, raha misy.
Ny mpampiasa dia tompon'andraikitra amin'ny angon-drakitra manokana an'ny antoko fahatelo azo, navoaka na nampitaina tamin'ny alàlan'ity fampiharana ity ary manamafy fa mahazo ny faneken'ny antoko fahatelo izy ireo hanome ny angona amin'ny tompony.
Fomba sy toerana fanodinana data
Mandray fepetra fiarovana mifanaraka amin'izany ny Tompo mba hisorohana ny fidirana tsy nahazoana alalana, ny fampahafantarana, ny fanovana na ny famotehana ny Data.
Ny fanodinana angon-drakitra dia atao amin'ny alàlan'ny ordinatera na fitaovana IT, manaraka ny fomba fiasa sy ny fomba fandaminana mifandray akaiky amin'ny tanjona voalaza. Ho fanampin'ny tompony, ny angon-drakitra dia azo idirana, amin'ny toe-javatra sasany, ho an'ny sokajin'olona sasany miandraikitra ny fampandehanana an'ity Application ity (fitantanana, varotra, varotra, sampana lalàna, fitantanana rafitra) na ho an'ny antoko ivelany (toy ny mpamatsy. serivisy teknika antoko fahatelo, hafatra, mpanome fampiantranoana, orinasa IT, masoivohom-pifandraisana) voatondro, raha azo atao, ho Subcontractors avy amin'ny tompony. Ny lisitra nohavaozina amin'ireo ampahany ireo dia azo angatahina amin'ny fotoana rehetra amin'ny tompony.
Fototra ara-dalàna amin'ny fanodinana
Azon'ny Tompo atao ny mikarakara angon-drakitra manokana mifandraika amin'ny mpampiasa raha toa ka mihatra ny iray amin'ireto fepetra manaraka ireto:
Ny mpampiasa dia nanome ny faneken'izy ireo ho an'ny tanjona iray na maromaro manokana; Fanamarihana: Araka ny lalàna sasany, ny tompony dia mety mahazo alalana hikarakara ny angon-drakitra manokana mandra-pahatongan'ny mpampiasa manohitra ("miala"), tsy mila miantehitra amin'ny fanekena na ny iray amin'ireo fototra manaraka ny raharaha ara-dalàna. Na izany aza, ity fepetra ity dia tsy mihatra rehefa ny fanodinana ny angon-drakitra manokana dia iharan'ny lalàna momba ny fiarovana ny angona Eoropeana;
ny fanomezana angon-drakitra dia ilaina amin'ny fanatanterahana fifanarahana amin'ny Mpampiasa na ho an'ny adidy mialoha ny fifanarahana ataon'ity farany;
ilaina ny fikarakarana mba hankatoavana ny adidy ara-dalàna izay iharan'ny tompony;
ny fikarakarana dia mifandray amin'ny asa atao ho tombontsoam-bahoaka na amin'ny fampiharana ny fahefam-panjakana nomena ny Tompony;
ny fanodinana dia ilaina ho an'ny tombontsoa ara-dalàna enjehin'ny Tompo na ny olon-kafa.
Na izany na tsy izany, faly ny Tompony hanampy anao hanazava ny fototra ara-dalàna manokana izay mihatra amin'ny fanodinana, ary indrindra raha fepetra ara-dalàna na ara-dalàna ny fanomezana angon-drakitra manokana, na fepetra ilaina amin'ny fifanarahana.
Ny angon-drakitra dia karakaraina ao amin'ny birao misoratra anarana amin'ny tompony sy any amin'ny toerana hafa rehetra misy ny tompon'andraikitra amin'ny fanodinana.
Miankina amin'ny toerana misy ny Mpampiasa, ny famindrana angon-drakitra dia mety hahatonga ny famindrana angon-drakitra avy amin'ity farany mankany amin'ny firenena hafa ankoatry ny azy. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny toerana fanodinana ny angon-drakitra nafindra toy izany, ny mpampiasa dia afaka mijery ny fizarana misy antsipiriany momba ny fanodinana ny data manokana.
Ny mpampiasa koa dia manan-jo hahafantatra ny fototra ara-dalàna amin'ny famindrana angon-drakitra any amin'ny firenena iray ivelan'ny Vondrona Eoropeana na amin'ny fikambanana iraisam-pirenena fehezin'ny lalàna iraisam-pirenena ho an'ny daholobe na noforonin'ny firenena roa na maromaro, toy ny Firenena Mikambana, ary koa ny fiarovana. fepetra noraisin'ny Tompo mba hiarovana ny angon-dry zareo.
Raha misy ny famindrana toy izany, ny mpampiasa dia afaka mahita bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fijerena ireo fizarana mifandraika amin'ity antontan-taratasy ity na manontany amin'ny tompony amin'ny alàlan'ny fampahalalana omena ao amin'ny fizarana fifandraisana.
Ny angon-drakitra manokana dia voahodina sy voatahiry mandritra ny fotoana takiana amin'ny tanjona nanangona azy.
Ny angon-drakitra manokana voangona ho an'ny tanjona mifandraika amin'ny fanatanterahana ny fifanarahana eo amin'ny tompony sy ny mpampiasa dia tsy maintsy tehirizina mandra-pahatongan'ny fanatanterahana ny fifanarahana.
Ny angon-drakitra manokana voangona ho an'ny tombontsoan'ny tompony ara-dalàna dia tokony hotehirizina mandritra ny fotoana ilàna azy mba hanatrarana ireo tanjona ireo. Ny mpampiasa dia afaka mahita fampahalalana manokana momba ny tombontsoa ara-dalàna ataon'ny Tompony ao amin'ny fizarana mifandraika amin'ity antontan-taratasy ity na amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny tompony.
Ny tompony dia azo avela hitahiry ny angon-drakitra manokana mandritra ny fotoana maharitra ny mpampiasa, raha toa ka tsy esorina izany fanekena izany. Ho fanampin'izay, mety ho voatery hitazona ny angon-drakitra manokana ny Tompony isaky ny takiana izany amin'ny fanatanterahana adidy ara-dalàna na amin'ny baikon'ny manam-pahefana.
Rehefa tapitra ny fe-potoana fitazonana dia ho voafafa ny angon-drakitra manokana. Noho izany, ny zon'ny fidirana, ny zo hamafa, ny zon'ny fanitsiana ary ny zo amin'ny fampitana angon-drakitra dia tsy azo ampiharina aorian'ny fahataperan'ny fe-potoana fitazonana.
Ny mpampiasa dia afaka mampiasa zo sasany momba ny angon-dry zareo nokarakarain'ny tompony.
Indrindra indrindra, manan-jo hanao ireto manaraka ireto ny mpampiasa:
Esory ny faneken'izy ireo amin'ny fotoana rehetra. Ny mpampiasa dia manan-jo hanaisotra ny faneken'izy ireo raha efa nanome ny faneken'izy ireo amin'ny fanodinana ny angon-drakiny manokana.
Tohero ny fanodinana ny angon-dry zareo. Ny mpampiasa dia manan-jo hanohitra ny fanodinana ny Datany raha toa ny fanodinana dia atao amin'ny fototra ara-dalàna ankoatra ny fanekena. Ny antsipiriany dia ampiana ao amin'ny fizarana mifandraika etsy ambany.
Midira amin'ny angon-dry zareo. Ny mpampiasa dia manan-jo hahafantatra raha karakarain'ny Tompon'ny angon-drakitra, hahazoana fampahalalana momba ny lafiny sasany amin'ny fanodinana ary hahazoana dika mitovy amin'ny angon-drakitra voakarakara.
Jereo ary alao ny fanitsiana. Ny mpampiasa dia manan-jo hanamarina ny fahamarinan'ny angonany ary hangataka ny hanavaozana na hanitsiana izany.
Fero ny fanodinana ny angon-dry zareo. Ny mpampiasa dia manana zo, ao anatin'ny fepetra sasany, hamerana ny fanodinana ny angonany. Amin'ity tranga ity, ny Tompon'ny tompony ihany no hikarakara ny angonany mba hitahiry azy.
Asaivo voafafa na voafafa ny angon-drakiny manokana. Ny mpampiasa dia manan-jo, ao anatin'ny fepetra sasany, hahazo ny famafana ny angona avy amin'ny tompony.
Alaivo ny angon-dry zareo ary afindrao any amin'ny mpanara-maso data hafa. Ny mpampiasa dia manan-jo haka ny angon-dry zareo amin'ny endrika voarafitra, fampiasa mahazatra ary azo vakiana amin'ny milina ary, raha azo atao ara-teknika, dia handefa izany amin'ny mpanara-maso hafa tsy misy sakana na inona na inona. Ity fepetra ity dia mihatra, raha toa ka voahodina amin'ny fomba mandeha ho azy ny angon-drakitra ary mifototra amin'ny faneken'ny mpampiasa ny fanodinana, amin'ny fifanarahana izay iraisan'ny mpampiasa azy na amin'ny adidy mialoha ny fifanarahana.
Mametraha fitarainana. Ny mpampiasa dia manan-jo hametraka fitarainana any amin'ny manam-pahefana mahefa miaro ny angona.
Fampahalalana momba ny zo hanohitra ny fanodinana
Rehefa voahodina ho tombontsoam-bahoaka ny angon-drakitra manokana, amin'ny fampiharana ny fahefana ofisialy nomena ny Tompony na ho an'ny tombontsoa ara-dalàna entin'ity farany, ny mpampiasa dia afaka manohitra ity fanodinana ity amin'ny fanomezana antony mifandraika amin'izany. tsy maintsy manamarina izany fanoherana izany.
Na izany aza, tokony ho fantatry ny mpampiasa fa raha karakaraina ho an'ny tanjona ara-barotra mivantana ny angon-drakitr'izy ireo, dia mety hanohitra izany fanodinana izany izy ireo amin'ny fotoana rehetra tsy misy fanamarinana. Raha te hahalala raha toa ny tompony dia manodina ny angon-drakitra manokana ho an'ny tanjona ara-barotra mivantana, ny mpampiasa dia afaka manondro ireo fizarana mifandraika amin'ity antontan-taratasy ity.
Ahoana ny fampiharana ireo zo ireo
Ny fangatahana rehetra hampiharana ny zon'ny Mpampiasa dia azo alefa any amin'ny Tompon'ny fampiasana ny antsipirian'ny fifandraisana omena ato amin'ity antontan-taratasy ity. Ireo fangatahana ireo dia azo ampiasaina maimaim-poana ary hodinihin'ny Tompo haingana araka izay azo atao ary ao anatin'ny iray volana foana.
Fanampim-panazavana momba ny fanodinana sy fanangonana angon-drakitra
Ny angon-drakitra manokana an'ny mpampiasa dia mety hampiasain'ny tompony amin'ny tanjona ara-dalàna eny amin'ny fitsarana na amin'ny dingana mitarika amin'ny hetsika ara-dalàna mety hitranga amin'ny fampiasana tsy mety an'ity fampiharana ity na ireo serivisy mifandraika amin'izany.
Fantatry ny mpampiasa ny zava-misy fa mety takiana amin'ny tompony ny manambara ny angon-drakitra manokana amin'ny fangatahan'ny manampahefana.
Fanampim-baovao momba ny angon-drakitra manokana an'ny mpampiasa
Ho fanampin'ny fampahalalana voarakitra ao amin'ity politika momba ny fiainana manokana ity, ity Application ity dia mety hanome fampahalalana fanampiny ho an'ny mpampiasa sy fampahalalana momba ny teny manodidina momba ny serivisy manokana na fanangonana sy fanodinana ny angon-drakitra manokana.
Log sy fikojakojana ny rafitra
Ho an'ny tanjona fampandehanana sy fikojakojana, ity Application ity sy izay serivisy an'ny antoko fahatelo dia mety hanangona rakitra izay mirakitra ny fifandraisana amin'ity Application ity (larin'ny rafitra) na mampiasa angona manokana hafa (toy ny adiresy IP) ho an'ity tanjona ity.
Tsy tafiditra ao anatin'ity politika ity ny fampahalalana
Ny fampahalalana fanampiny momba ny fanangonana na fanodinana ny angon-drakitra manokana dia azo angatahina amin'ny fotoana rehetra amin'ny tompony. Jereo azafady ny antsipirian'ny fifandraisana eo am-piandohan'ity antontan-taratasy ity.
Ahoana ny fomba fitantanana ny fangatahana tsy manara-maso
Ity fampiharana ity dia tsy manohana ny fangatahana "Aza araho".
Jereo ny politikan'ny tsiambaratelon'ny serivisy an'ny antoko fahatelo mba hamaritana raha manaiky ny fangatahana "Aza araho" izy ireo na tsia.
Fanovana amin'ity politikan'ny fiainana manokana ity
Ny Tompo dia manan-jo hanao fanovana amin'ity politika momba ny fiainana manokana ity, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fampahafantarana ireo mpampiasa azy eto amin'ity pejy ity ary mety amin'ity fampiharana ity na - araka izay azo atao ara-teknika sy ara-dalàna - amin'ny fandefasana fampahafantarana amin'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny antsipirian'ny fifandraisana misy. amin'ny Tompo. Tena soso-kevitra ny hijery matetika ity pejy ity, manondro ny datin'ny fanovana farany voalaza etsy ambany.
Raha misy fiantraikany amin'ny hetsika fanodinana atao amin'ny alàlan'ny faneken'ny Mpampiasa ny fanovana, dia tsy maintsy mahazo fanekena vaovao avy amin'ny Mpampiasa ny Tompo rehefa ilaina izany.
COVID-19: Inona no azon'ny fikarohana Google lazaina amintsika momba ny fanorisorenana mandritra ny areti-mifindra? | Vaovao UK